को मानकीकृत दूध
दूध, oddly पर्याप्त, उत्पादन मौसमी छ। दूध पैदावार वसन्त देखि उठ्नेछ, र पुग्न जाडो गर्न एक चोटी गर्मी एकदम कम थाल्छन्। तपाईं स्टोर दर्जनौँ वरिपरि "वास्तविक" वा "प्रत्यक्ष", वा, technologists रूपमा, "कच्चा" दूध को खोज मा प्राप्त गर्न सक्छन्, तर उहाँलाई फेला पार्न थिएन। "मानकीकृत दूध" वा "दूध pasteurized": बरु, डेयरी खण्ड अप्रकट inscriptions संग फरक बिक्रेताबाट बैग बन्द देखाउनेछ। हामी, साधारण नागरिक, यो अलमलमा छ: यो लेखिएको के गर्छ?
र वास्तवमा, यो सरल छ। को मानकीकृत दूध - दूध, विगतका प्रक्रिया। Dairies मा प्रविधिको उद्देश्य कार्यहरू एक नम्बर सुलझाने कम छ: दूध सकेसम्म लामो समयसम्म खट्टे बारी नदेऊ। र तरिका यी पर्याप्त छन्। को toughest र सबै भन्दा साधारण - बंध्यकरण (धेरै एक फोडा गर्न ल्याउन)। दोस्रो तरिका - pasteurization। विधि 30 मिनेट दूध लागि थप कोमल 65-70 डिग्री को एक तापमान मा राखिएको छ छ। -, र त्यसपछि - यो तात्कालिक ठंडा तीव्र ताप (135 डिग्री केहि सेकेन्ड को लागि): चिह्नों (प्रतिमा) UHT उच्च तापमान उपचार संकेत गर्छ।
तर pasteurization - विश्व लागि सामान्य रूपमा व्यापार। तर शङ्का मा दूध पाउडर को "पुनरुद्धार"। र वाक्यांश लागि "मानकीकृत दूध" अक्सर बस जस्तै psevdomoloko लुकाउने छ। यो प्रविधि कसरी व्याख्या गर्ने?
को मानकीकृत दूध दुई प्रकार को हुन सक्छ।
अनुसार एक निश्चित प्रविधि संग 1. साबुत ताजा दूध, बोसो सामग्री मानक स्थापित गर्न ल्याइएको हो।
2. मानकीकृत दूध (वा recombined वा reconstructed) को पाउडर देखि तयार छ। म सम्झना पुरानो व्यावसायिक रस रमाइलो वाक्यांश "भर्खर पानी थप्न" संग "आमन्त्रण"। यहाँ नै सिद्धान्त: निर्माता को धुलो दूध पानी थप्छ। तर केही कारणले खरीदार गरेको प्रतिष्ठा राख्न बिर्सन्छन्। वा भूल छैन?
तरल मा किनेको पाउडर उपस्थिति मात्र स्पेक्ट्रल विश्लेषण देखाउन सक्छौं। परिणाम सामान्य परम्परागत विश्लेषण दिनुभएन। यो केवल एक विशेष परीक्षा आवश्यक छ। तर प्राकृतिक दूध को स्वाद चिन्नेहरू, विश्लेषण बिना नै पहिचान र स्वाद,: पाउडर मानकीकृत दूध sweetish विशिष्ट स्वाद, एक दूध पाउडर को विशिष्ट छ।
अनौठो कुरा हो - यो जस्तो थियो, ट्याप लाभ सबैलाई मा दूध को कार्यान्वयन: निर्माता, खरीदार र विक्रेता। डेयरी फारमहरु लगातार पसलहरूमा मा ताजा दूध पारित गर्दै छन्, खरीदार दूध वर्तमान (पुरा) छ थाह, र पसलहरु आफूलाई छन् (प्राप्त गर्न सक्छ) तिनीहरूले प्याकेज दूध प्राप्त भन्दा बिक्री को प्रतिशत।
तर समस्या साँच्चै छ।
पहिले, दूध उत्पादन perishable बुझाउँछ। त्यसैले, यो काउन्टर पुग्न असफल, खट्टे गर्न सक्नुहुन्छ। एक हानि - यो छ। प्रत्यक्ष।
दोस्रो, दूध thermally, उपचार छैन salmonellosis र क्षयरोग को रूप मा "आश्चर्य" हुन सक्छ। र यदि अचानक शङ्काको कम्तिमा एक पशु द्वारा पतन हुनेछ, तपाईं पूर्ण माल को ढुवानी बन्द छ। यी नै प्रश्न प्रशोधन शुट।
तेस्रो, सडक मा व्यापार दूध (को बजार मा) विभिन्न सन्दर्भहरू र प्रमाणपत्रहरू धेरै प्राप्त गर्न आवश्यक छ। र प्रत्येक पार्टीको लागि। उत्पादनहरु को सुरक्षा पुष्टि जो SES गर्न पशु सेवा को संकल्प। यो पैसा लायक छ। सबै समय र आर्थिक उपलब्धता मा निर्भर गर्दछ। एक दूध "पर्खाइ" छैन हुनेछ। यहाँ तंग समय सीमा। त्यसैले किसान प्रस्तावित, स्पष्ट कम मूल्य को पहिलो क्रेता गर्न दूध लिन बाध्य।
को हारे र दूध आपूर्तिकर्ता (को गाउँलेहरू), र उपभोक्ताहरु विकल्प को deprived छन्। यो रूसी दन्तिये मा जस्तै छ: जुङ्गा बग्ने देखिन्छ, त्यसैले मुख मा प्राप्त भएन।
एक-टुक्रा र ताजा .. - हामी शालीनता निर्माताहरु लागि मात्र आशा गर्न सक्नुहुन्छ र दूध एक शेल्फ मा हामी सामना सामान्यकृत कि आशा ध्यान (विशेष गरी साना मुद्रण भएकाहरूले) लेबल पढ्न भूल छैन, यसलाई "मन №1" बुझाउँछ ।
Vents: उत्पादन को विवरण
जर्मन "चितुवा" ट्यांक, संसारभरि धेरै देशहरूमा लोकप्रिय
लागत मूल्य अमेरिकामा 2014 मा तेल shale
प्रति खेल आय: कसरी बनाउने? रिच चरा तपाईंलाई मदत गर्नेछ सक्रिय सान्दर्भिक!
"Yandex। प्रत्यक्ष" मा सीटीआर के हो? सूचकांक सीटीआर सीटीआर
Mastectomy: सङ्केत गर्छ, सर्जरी लागि तैयारी, जटिलताहरू
स्याउ EarPods - "ayfon 5" को लागि हेडफोन
विदेशी व्यापार को गैर-महसुल विनियमन। गैर-महसुल उपायहरूको वर्गीकरण
टिपर "Hovo": विनिर्देशों, मालिकको समीक्षा, फोटो
"सैर" - के शब्द खडा लागि हो?
मास्को मा छोराछोरीको क्याफे। छोराछोरीको रेस्टुरेन्ट र क्याफे: समीक्षा, मूल्यहरू र फोटो
एलसीडी टिभी: कुन कम्पनी राम्रो छ? एलसीडी टीभी: मूल्य, सुविधाहरू, छनौट लागि सुझावहरू
केक "सुन जस्तो माछा": नुस्खा, दर्ता
सौर शक्ति बिरुवाहरु। संचालन र दृष्टिकोण को सिद्धान्त